Indlu yeLagma studio ibekwe ecaleni kwendlela enkulu edibanisa iPrimorska kunye neGorenjska. Indlu inendawo enkulu yokupaka yabucala enesango labucala lestudiyo.
Indawo yokuhlala ikumgangatho wokuqala ejonge uMlambo iSora kunye neenduli ezikufutshane. Isitudiyo sikhulu kwaye sigqamile sinendawo yomlilo, igumbi lokulinda elinebha, kunye nendawo yokuphumla.
Uza kungena kwigumbi lokulinda, ekunene kukho igumbi lokuhlambela, ekhohlo ligumbi lokuhlala. Kwelo gumbi likhulu, unesofa enwetshiweyo, ibhedi enye 90cmx200cm, ikhitshi elincinci, itafile, kunye nezitulo.
Intlambo inika amava ahlukeneyo kunye nemisebenzi. Ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba, ukuloba, i-parachuting, ukutyelela kwimyuziyam ye-ironworks, ukuhamba kwindawo endala yedolophu yaseZelezniki, kunye nokutyelela iintsuku zokwenza i-lace, apho ufunda ngakumbi malunga nemvelaphi ye-lace.
Ngenxa yemeko yangoku ye-COVID 19, siye sahlengahlengisa ulwamkelo lweendwendwe. Ukuzihlola kuyafumaneka.